Nezvedu - Foshan Gaoming Zhengxing Mechan-Elecronic Co., Ltd.
FOSHAN GAOMING ZHENGXING MECHAN-ELECTRONIC CO., LTD (ZXM Girazi MACHINERY Kambani LIMITED) iri hi-tech bhizinesi rinoshanda mukugadzira, kugadzira uye kugadzira girazi kugadzira michina. It rakaumbwa muna 2001, uye ane makore 19 ruzivo mugirazi vachikuya uye makorari michini rwokugadzira tsvakurudzo uye munufacturing. Yedu fekitori chirimwa iri muGaoming, Foshan, Guangdong, China, padhuze neGuangzhou. Tine imba yekuchengetera zvinhu muChencun, Foshan uye kaviri edger muchina showroon muLunjiao, Foshan. Kugamuchirwa kutishanyira uye iwe uchafadzwa.
ZXM inogadzira akasiyana siyana egirazi ekugadzirisa michina inosanganisira girazi edging muchina, girazi beveling muchina, girazi rinosimudza muchina, girazi mbiri edging muchina, girazi kutenderera kumucheto muchina, girazi kuchera muchina, chimiro girazi kutenderera / beveling muchina, girazi sludge dehydrator, nezvimwe. Vatengi vanogona kusarudza sarudzo dzinochinja-chinja dzemanyore mode kana otomatiki modhi michina, cheni conveyor system kana bhora rinotakura conveyor system muchina kuti uwane zvido chaizvo. Isu tinopawo girazi yekuwachisa girazi uye girazi sandblasting muchina zvinoenderana nechikumbiro chemutengi.
ZXM mushure-kutengesa sevhisi kunoenderana neakanaka uye mu-nguva kutaurirana nevatengi. Mutengi achaziviswa nezvenyaya dzakagadziridzwa pamusoro pekumhanyisa mhanyisa, chinzvimbo chekutumira uye magwaro ekuendesa magwaro, nezvimwewo, nyanzvi dzedu dzehunyanzvi dzinopa rutsigiro rwehunyanzvi senge kumisikidzwa kwemuchina, kugadzirisa michina, kure kure vhidhiyo confrrence kubatsira vatengi vekunze kugadzirisa matambudziko ehunyanzvi kuti ave nechokwadi chekuti michina inoshanda mushe. .
Nemhando yakagadzikana, mutengo wemakwikwi, uye kutaurirana kwakanaka kwebhizinesi, tinowana mukurumbira wakakwirira kumisika yepamba neyekunze. ZXM bhizimusi musika inovhara nyika dzinopfuura makumi mana uye izvozvi ichiri kukura. Kugamuchirwa kuti ubatane nesu kuti uwane win-win mushandirapamwe!
• ZXM inotora ivhu remazana mazana matatu emamirimita.
ZXM nhamba yevashandi vanopfuura mazana maviri.
• ZXM yekugadzira inokwana inosvika chiuru chemuchina pagore.
• ZXM Distributors nenzvimbo dzekushandira dzinofukidza nyika dzinosvika makumi mana.
• ZXM inopa yakasarudzika sevhisi.
• ZXM 19-gore rehunyanzvi uye rakapfuma ruzivo uye rutsigiro rwevatengi vepasirese.